IKorintiana 14: 1-40
IKorintiana 13 IKorintiana 14 IKorintiana 15
Miezaha mitady ny fitiavana, nefa maniria fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny haminany.
Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra hianareo rehetra; nefa aleo haminany; fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy hahazoan'ny fiangonana fampandrosoana.
Ary ny zavatra tsy manana aina, na sodina, na lokanga, na dia maneno aza, raha tsy manao feo samy hafa, ahoana no hahafantarana izay ataony na amin'ny sodina, na amin'ny lokanga?
Dia toy izany koa hianareo: raha tsy mazava ny teny aloaky ny vavanareo, hatao ahoana no fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany, dia hiteny amin'ny rivotra hianareo.
Ary toy izany ihany koa hianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra.
Fa raha misaotra am-panahy fotsiny ihany hianao, hataon'izay tsy mahay ahoana no hanao 'Amena' raha misaotra hianao? Satria tsy mahalala izay lazainao izy.
Fa hianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba ampandrosoina.
Misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho hianareo rehetra aho;
Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana: raha amin'ny lolompo dia aoka ho zaza-bodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa.
Voasoratra amin'ny lalàna hoe: Amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no hitenenako amin'ity firenena ity; fa na dia amin'izany aza dia tsy hihaino Ahy izy, hoy Jehovah (Isaia 28:11-12) .
Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino; fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino, fa tsy amin'ny tsy mino.
Koa raha vory ny mpiangona rehetra, ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay, na ny tsy mino, tsy holazainy va fa very saina hianareo?
ka dia miseho ny zavatrra takona ao am-pony, dia hiankohoka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady hilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa.
Ahoana ary no izy, ry rahalahy? Raha miangona hianareo, misy ta-hanao hira hianareo, misy ta-hanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikan-teny. Aoka ny zavatra rehetra hatao ho fampandrosoana.
fa mahazo maminany tsirairay hianareo rehetra, mba hianaran'izy rehetra sy hamporisihana azy rehetra;
Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana, fa tompon'ny fiadanana. Araka ny fanaon'ny fiangonan' ny olona masina rehetra,
dia aoka hangina ny vehivavy raha ao am-piangonana fa tsy avela hiteny izy, fa aoka hanoa tsara araka ny lazain'ny lalàna koa.
Ary aminareo va no nihavian'ny tenin'Andriamanitra, sa ao aminareo ihany no nahatongavany?
Koa amin'izany, ry rahalahiko, maniria fatratra ny haminany ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra;